Roma iyo Inter Milan oo xiiseynaya xidiga Tottenham Hotspur ee Harry Winks | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Roma iyo Inter Milan oo xiiseynaya xidiga Tottenham Hotspur ee Harry Winks
Roma iyo Inter Milan oo xiiseynaya xidiga Tottenham Hotspur ee Harry Winks
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Tottenham Hotspur Harry Winks ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseynayaan kooxaha Inter Milan iyo Roma .
25 jirkaan ayaa ku guuldareystay inuu noqdo udub dhexaadka Nuno Espirito Santo ee Waqooyiga London waxaana uu ciyaaray kaliya 61 daqiiqo oo kubada cagta ah xilli ciyaareedkii 2021-22 Premier League ilaa iyo haatan.
Winks ayaa lala xiriirinayay kooxaha Manchester United, Aston Villa iyo Everton xagaagii hore ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa loo saadaalinayaa inuu sugo bixitaankiisa bisha Janaayo iyadoo uusan haysan waqti uu ku ciyaaro.
Sida laga soo xigtay Calciomercato , Inter iyo Roma ayaa labaduba xiiseynaya inay Winks keenaan Serie A, iyadoo Jose Mourinho uu doonayo inuu dib ula midoobo ciyaartoygiisii ​​hore ee Talyaaniga.
Wargeysku wuxuu soo tebinayaa wararkii hore ee sheegayay in Winks uu doonayo inuu ku qasbo ka tagitaanka bisha Janaayo, in kasta oo uu weli ka harsan yahay wax ka yar afar sano heshiiskiisa Tottenham.
Xiddiga 10-ka kulan u saftay England ayaa 178 kulan u saftay Tottenham tartamada oo dhan, isagoo soo bandhigay afar gool iyo shan caawin.
Previous articleDaawo: Odowaa oo sheegay arrin cabsi leh oo kusoo socota maamulka Qoor Qoor
Next articleArsenal oo dooneysa Calvert-Lewin, Watkins si ay ugu bedesho Lacazette
Daafaca dhexe ee kooxda Chelsea Antonio Rudiger ayaa qirtay inay sharaf u tahay in lala xiriiriyo Bayern Munich laakiin uu diirada saarayo kaliya...